Musi wa 2 Gunyana izuva rekucherechedza kupera kwehondo yepasi rose yechipiri, kana kuti Second World War 11
Magwaro aya akasainwa mungarava yaive mumahombekombe meTokyo yeUSS Missouri pakati pevamiriri veAmerica neJapan
Zvichitevera kutambira kukundwa kweGermany musi wa 8 Chivabvu, hondo yepasi rose yechipiri yainge yapera muEurope. Asi zvisineyi, kurwisana kwakaramba kuchienderera mberi mudunhu rePacific, uye hondo yakaramba ichitsvirira kudzamara Japan yakanda zvombo pasi.
Asi Japan yakaramba kutambira zvakanga zvatarwa.
Kwemakore anodarika matatu, America nemadzisahwira ayo mudunhu rePacific, vakakutsirana Japan muhondo yakakurisisa yakaitwa mugungwa rePacific nezvitsuva zvaro, izvo zvakakonzera kuti vanhu vakawanda nemauto mazhinji emuJapan, vazviuraye
“Kumatunhu ari muPacific, kwava nerusununguko. Nhasi, rusununguko ndirwo rwuri kurwirwa, hutongo hwejechetere huri kuenderera mberi. Nhasi, munyika dzemuAsia, pamwe nemuEurope, vanhu vane rusununguko vari kunzwa kutapirirwa nehutongo hwejechetere, kuzorodzwa kubva mukugara munhu achitya.”